Kedu esi eji ngwá ọrụ Amazon mee ka azụmahịa gị dị elu?
Ka ị nwee ike ịga nke ọma na azụmahịa gị na Amazon ma nwee oge na azụmaahịa gị, ịkwesịrị iji ngwaọrụ enyemaka nye ndị ahịa Amazon FBA. Ihe ndị dị otú ahụ ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, na-azọpụta oge gi na nyocha na nyocha nke oge.
Ọ bụrụ na ị nọ na njedebe nke azụmahịa gị Amazon, ana m akwado ịrapagidesi ike na isi ihe iji mee ka ụgwọ gị dị ala. Mgbe obere oge gasịrị, mgbe azụmahịa gị ga-aba uru, ịnwere ike ịmalite ịgbakwunye ngwá ọrụ ndị ọhụrụ iji mekwuo arụpụta azụmahịa gị - computer fix sunnyvale.
Ịmalite azụmahịa gị na Amazon anaghị achọ ihe ọ bụla dị mkpa. Otú ọ dị, ị kwesịrị iche echiche banyere ọganihu gị n'ọdịnihu. Ị ga-aghọta na ịmalite ịzụ ahịa na Amazon dị mfe karịa ịmepụta ya. N'oge ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa iji melite ọnụọgụ ahịa gị na ọkwa ọzọ. Ma ọ bụghị ya, ị ga-efunahụ ndị ahịa na uru anyị.
Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a, anyị ga-atụle ngwá ọrụ Amazon kachasị dị irè nke ị nwere ike iji maka ịmepụta azụmahịa gị FBA.
TOP na-eme nchọpụta ngwaọrụ na Amazon
Ọ bụ ngwá ọrụ ọnyà Amazon n'efu nke na-enyere aka iburu ebe JS hapụrụ ma chekwaa data akụkọ ihe mere eme. Ọ na-enyocha ọtụtụ ngwaahịa Amazon ma mee ka ị mara mgbe ahịa dobe. Data nke ngwá ọrụ camel nyere ga-enyere gị aka ịnọgide na-asọmpi n'ahịa ahịa gị ma dịrị na TOP nke azụmahịa a. Ọzọkwa, ọ na-enyere aka ịchọpụta ihe ziri ezi nke ahịa data. Ị nwere ike ịchọpụta ma ngwaahịa ndị a na-agbalite ma na-ere ahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Iji ngwá ọrụ Camel, ị nwere ike ịchọpụta oge na-aga. O di nwute, ngwá ọrụ a enweghị ọrụ ọ bụla ọzọ.
Ndepụta Ngwaahịa Lab
Ndepụta Ngwaahịa Lab bụ ngwá ọrụ nke na-arụ ọrụ iji melite ndepụta ngwaahịa na Amazon. Iji ngwá ọrụ a eme ihe, ị nwere ike ịchọta ngwaahịa, depụta ma jikwaa ha. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmefu ego gị dum ma gbakọọ uru ntanetị. Ọ na-enye ohere iji bipụta ahapụta n'otu n'otu mgbe ị na-agbakwụnye ihe ọ bụla na ngwaahịa ahụ. Ị na-enweta uru bara uru mgbe ị na-achọpụta ihe ndị bara uru maka azụmahịa gị site na iji ngwaọrụ mkpanaka.
Uru ọzọ nke ngwá ọrụ a bụ na ị nwere ike soro azụmahịa gị profitability maka ọ bụla SKU na ị aja ka Amazon.
Ndepụta Ngwaahịa na-enye ụbọchị 30 nke oge ikpe. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-akwụ ụgwọ $ 49 kwa ọnwa.
Iji mepụta abụba azụmahịa gị, ị ga-achọ ịma nke isiokwu ị kwadobere maka ya, na ihe ịkwesịrị imezi iji bulie ahịa. AMZ Tracker software ga-enye gị data a niile, enyere gị aka ikpebi ihe ị kwesịrị ime na azụmahịa gị. Ọzọkwa, iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike soro ngwaahịa onye ọsọ gị iji hụ mgbe ha na-agbanwe. AMZ Tracker na-enyere gị aka ịchọpụta ihe na-eweta mgbanwe ntọghata gị ma dozie ya na oge. Na mgbakwunye na ya, ị nwere ike nyochaa nyocha ndị na-adịghị mma na ịmepụta ngwaahịa dị mfe karịa ụlọ ọrụ nyocha ha. Mara na ngwá ọrụ a nwere ụgwọ kwa ọnwa ma ghara inye ọrụ ọ bụla n'efu.